﻿ ​‘अविभावकको आवश्यकतालाई हेरेर मन्टेश्वरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं’
शुक्रबार ०८, चैत २०७५
सुन्दर हरैचाको बलियामा रहेको ब्लुबेल चिल्ड्रेन केयर मन्टेश्वरी स्कुल २०७३ सालमा स्थापना भएको शिक्षालय हो । शिक्षक शिक्षिकाहरु चार जना र अन्य सदस्यसमेत गरेर ८ जना जनशक्तिले सञ्चालन गरिरहेको यो मन्टेश्वरीमा युकेजीसम्म पढाइ हुने गरेको छ । जम्मा विद्यार्थी ७० जना छन् । आगामी वर्षदेखि कक्षा बढाउदै लैजाने तयारी गरिरहेको यस स्कुलकी सञ्चालिका सिर्जना कट्टेलसंग स्कुलको विभिन्न विषयमा न्युजलयकी सरीता भण्डारीले गरेको कुराकानीः
मन्टेश्वरी के हो ?
मन्टेश्वरी भनेको एउटा आधुनिक शिक्षा विधि हो । मन्टेश्वरीमा विद्यार्थीहरुलाई कुनैपनि विषयबस्तुको खोज, अन्वेषण गर्दै उनिहरुको क्षमतालाई विकास गरिन्छ । परम्परागत स्कुलमा जस्तै मन्टेश्वरीमा घोकेर, रटेर नभई प्रयोगात्मक गतिबिधिमार्फत् बच्चाहरुलाई पढाउने गरिन्छ ।
मन्टेश्वरीमा अन्य स्कुलहरुमा भन्दा कस्तो फरक तरिकाले पढाई हुन्छ ?
अन्य स्कुलहरुमा एउटा मात्रै पद्धती हुन्छ जहाँ घोकाएन्छ, रटाइन्छ । तर, मन्टेश्वरीमा धेरै फरक पद्धती बाट पढाइने गरिन्छ । बच्चाहरुले कसरी छिटो बुझ्छन् त्यहि अनुसार नै हामी जाने गर्छौँ ।
तपाइको मन्टेश्वरीको विशेषताहरु के के छन् ?
यहाँ बच्चाहरुलाई २ पटक खाजा खुवाउने गरिन्छ । नानीहरुलाई मन्टेश्वरी ल्याण्डको सामानहरु प्रयोग गरेर सिकाइन्छ । उनीहरुको बौद्धिक विकासको लागि विभिन्न खेलहरु खेलाइन्छ । उनीहरुलाई हामीले नजिकै टुरहरु पनि लाने गरेका छौँ । हामीले त्यसरी नै उनीहरुलाई पारिवारीक वातावरण दिएर सिकाइरहेका छौँ ।
यहि ठाउँमा चाहिँ किन स्थापना गर्नुभयो ?
सुरुमा ठाउँको खोजी गरियो, त्यसपछि अभिभावकहरुको पनि चाहना बुझियो र उहाँहरुले पनि हामीलाई एउटा राम्रो मन्टेश्वरीको आवश्यकता छ भनेपछि हामीले यहाँ खोलेका हौँ । यो मन्टेश्वरीलाई अझ बढाउँदै लैजाने र पछि गएर ठुलै विद्यालय बनाउने योजना रहेको छ ।
मन्टेश्वरीहरुमा तालिम प्राप्त शिक्षक चाहिन्छन्, यस मन्टेश्वरीमा कस्तो खालको व्यवस्था छ ?
हाम्रो मन्टेश्वरीमा जति पनि शिक्षकहरु हुनुहुन्छ तालिम प्राप्त नै हुनुहुन्छ । मन्टेश्वरीको तालिम लिएर नै हामीले उहाँहरुलाई छनौट गरेको हो ।
अहिले धेरै ठाउँमा मन्टेश्वरी खुलिरहेका छन् यसलाई तपाईले कुन हिसाबले लिनु भएको छ ?
अहिले धेरै ठाउँहरुमा मन्टेश्वरी तथा प्रि–स्कुल खुलिरहेका छन् । यसलाई एउटा राम्रो तरिकाले लान सक्दा अझ राम्रो हुन्छ । स्कुल खोल्दा पनि तालिम दिएर अन्य तरिकाले खोल्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
तपाईको विचारमा नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
नेपालको शिक्षाको अवस्था त राम्रै छ । तर पनि नेपालको कतिपय स्थानका धेरै नानीहरु स्कुल जान पाइरहेका छैनन् । उनिहरु शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । उनीहरुलाई कसरी विद्यालय सम्म पुर्याउन सकिन्छ त्यसमा सरकारले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । र हामीले पनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार्नलाई के गर्नु पर्ला ?
नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार्न एउटा व्यक्तिले मात्र सम्भव छैन । सबैभन्दा पहिले सरकाले कति विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन, त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यहि अनुसार उनिहरुलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय अभिभावकहरुले मन्टेश्वरीमा लगेर बच्चाहरुलाई खेलाइन्छ, सुताइन्छ, टिभि हेराउने मात्र त गरिन्छ भनेर सोच्ने गरेको पाइएको छ । तर वास्तवमा त्यस्तो हुन्दैन । मन्टेश्वरी भनेको एउटा पद्धती मात्र हो । यहा टिभि त देखाइन्छ तर टिभिमा पनि के देखाइन्छ भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ । बच्चालाई किन सुताइन्छ, किन खेलाइन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । यो सबै बालबालिकाहरुको मनोविज्ञानअनुसार उनीहरुलाई सिकाउने तरिका हो ।
त्यसैले आउनुहोस्, हाम्रो विद्यालय घुम्नुहोस् । हेरेर, बुझेर आफ्ना नानीहरुलाई भर्ना गर्नुहोस् । हामी राम्रो केयर गरेर उनीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिन्छौं ।